कास्मिरमा आतंककारीको अखडा ध्वस्त र करिब ३०० जना आतंककारी मारिएको खुलासा। - Gulf Sandesh
यू-१८ साफ च्याम्पियनसिप खेलमा आज नेपाल र भुटान भिड्दै।
संखुवासभाको अक्कर दुर्घटनाका वेपत्ता नभेटेपछि गोताखोर फर्किए।
यसवर्षको टीकाको साइत विहान १० बजेर ३५ मिनेटमा।
नेपालमा आउने दसैंका सामान केरुङमा थन्किए।
अमेरिकी डलरको मूल्य सहित अन्य देशको कति मूल्य पुग्यो ? (सूचीमा हेर्नुहोस्)
कास्मिरमा आतंककारीको अखडा ध्वस्त र करिब ३०० जना आतंककारी मारिएको खुलासा।
February 28, 2019 February 28, 2019 GulfSandesh0Comments
काठमाडौँ ,भारतीय वायुसेनाका फाइटर विमानको आक्रमणबाट पाकिस्तान अधिनस्थ कास्मिरमा आतंककारीको अखडा ध्वस्त भएको र करिब ३०० जना आतंककारी मारिएको खुलासा भएको छ ।
भारतको मिराज फाइटर जेटले पाकिस्तान अधिनस्थ क्षेत्रमा मंगलबार बिहान आक्रमण गरी ठूलो आतंकवादी शिविर नष्ट गरेको हो । भारतीय वायुसेनाको फाइटर जेटले बिहान मंगलबार बिहान ३ः३० बजे सिमारेखा पार गरेको थियो । मिराज २००० सहितका लडाकु विमानहरू पाकिस्तान अधिनस्थ क्षेत्रमा प्रवेश गरी आतंककारी शिवरमा १००० किलो बम खसालेका थिए ।
भारतीय वायु सेनाले खसालेको बम पड्किदा पाकिस्तानमा रहेको आतंककारी समूह जैश–ए–मोहम्मदको अखडा ध्वस्त भएको र करिब ३०० जना आतंककारी मारिएको दाबी गरिएको इण्डिया टुडेले जनाएको छ ।
त्यस्तै भारतीय अर्को मिडियाले पनि भारतको पाकिस्तानमाथिको आक्रमणबारे स्पष्ट पार्दै ३०० जनाभन्दा बढी आतंककारीको ज्यान गएको भारतीय सोचारमाध्यम आजतकले बताएको छ । यसलाई भारतको दोस्रो सर्जिकल स्ट्रइक नाम दिइएको छ । यो भन्दा अगाडि २०१६ मा उडी आक्रमणपछि भारतीय सेनाले सर्जकल स्ट्राइक गरेर पाकिस्तानलाई झट्का दिएको थियो ।
भारतीय वायुसेनाको अपरेशन जम्मा २१ मिनेटको थियो । यो २१ मिनेटमा भारतीय १२ मिराज फाइटरले पाकिस्तानका अलग–अलग स्थानमा हमला गरे । यस हमलामा ३०० भन्दा बढी आतंककारी मारिउको अनुमान गरिएको छ । स्रोतकाअनुसार भारतीय वायुसेनाले बालाकोट र मुजफराबादमा हमला गरेको थियो । भारतीय वायुसेनाले ३०० किलोको बम फालेको थियो ।
यो भन्दा पहिले पाकिस्तानी सेनाका मिडिया शाखा अन्तर–सेवा जनसम्पर्क९आईएसपीआर० का महानिर्देशक मेजर जनरल आसिफ गफूरले ट्वीटबाट भारतीय कारबाहीबारे कन्फर्म गरेका हुन् । तर, भारतले भने कुनै क्षति नभएको जनाएको छ । यसपछि पाकिस्तान भारतसँग आक्रोशित भएको छ ।
← काठमाण्डौ वरिपरीका डाँडा हिउँले सेताम्मे टल्किए
ताप्लेजुङ्ग हेलिकप्टर घटनामा परेका सात जनाकै शव पोस्टमार्टमका लागि टिचिङ अस्पताल लगियो। →
नेपालका गृहमन्त्रीसँग पाकिस्तानले राखेको प्रस्ताबमा भारत किन झस्कियो !
थाइल्याण्डकी राजकुमारी प्रधानमन्त्रीका लागि किन अयोग्य ठहरिइन् ?कारण यस्तो रहेछ
टर्कीमा आप्रवासी चढेको लरी दुर्घटना , २२ जनाको निधन
आजको राशिफल २०७६ साल असोज ०५ गते आईतवार नेपाल सम्बत ११३९ सन् २०१९ सेप्टेम्बर २२ तारिख।
September 22, 2019 GulfSandesh 0
Sharing is caring! Share Tweet Pin 0shares असोज ०५ काठमाडौँ ,राशिफलमा जे जस्तो लेखे पनि स्वस्थ रहनुहोस, मस्त रहनुहोस, खुसि
आजको राशिफल २०७६ साल भदौ ३१ गते मंगलवार नेपाल सम्बत ११३९ सन् २०१९ सेप्टेम्बर १७ तारिख।
September 17, 2019 GulfSandesh 0
आजको राशिफल २०७६ साल भदौ २९ गते आईतवार नेपाल सम्बत ११३९ सन् २०१९ सेप्टेम्बर १५ तारिख।
September 15, 2019 GulfSandesh 0
आजको राशिफल २०७६ साल भदौ २८ गते सनिवार नेपाल सम्बत ११३९ सन् २०१९ सेप्टेम्बर १४ तारिख।
September 14, 2019 GulfSandesh 0